मनपरी फ्रिक्वन्सी वितरणबाट गुमेको १० अर्ब राजस्व कसले तिर्छ ? - Aarthiknews
मनपरी फ्रिक्वन्सी वितरणबाट गुमेको १० अर्ब राजस्व कसले तिर्छ ?
दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदोे
काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले नवीकरण शुल्कको विषय चर्चामा रहको छ । तर, सरकारले दूसञ्चार क्षेत्रमा भएका बेथितिका विषयमा यसभन्दा पहिला गरिएका अध्ययनलाई नै कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । २०६८ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
टेलिकमको मोबाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा शुरु